Nxulumana neMigangatho yokuHlola ekuLungiselela ukuSebenza »IHodges U
iindidi: Iinyani nje
Khetha iYunivesithi yaseHodges kwiNkqubo yakho yokuDibana
Inyathelo lokuqala kuhlala kunzima ukulithatha, ke makhe siqale namhlanje. Andiqinisekanga ukuba uqale ngaphi? Apha ngezantsi uyakufumana i-no-frills, izizathu-zokuba kutheni iHodges kufanelekile ukuba iyunivesithi elungileyo.
Awuqinisekanga ukuba inqanaba likamva lakho?
“Njengabafundi abaninzi baseHodges, ndiqalise izifundo zam eziphezulu emva kwexesha ebomini kwaye kwafuneka ndilungelelanise umsebenzi osisigxina, usapho kunye nekholeji. Yiyo loo nto iYunivesithi yaseHodges ingakhange ibeke iimfuno zabantu abadala kuphela kwiziko lemizamo yokunceda imfundo ephezulu ukuba iguquke, kodwa iphuhlise izicwangciso ezingqiniweyo zokunceda abafundi baphumelele ebomini nasesikolweni.
Ngokucwangciswa kweklasi kube kanye-ngenyanga, imihla yokuqalisa kwekhosi yanyanga zonke, idityaniswe nesantya esikhawulezileyo sokuhamba kwekhosi, siyenyuka ukudibana nomfundi obuyayo ngesiqingatha seenkqubo ezingqongqo ezingadingi ixesha lokuncama iikholeji zemveli. Ukongeza, imodeli yethu yeCore + 4 ivumela abafundi abagqibe iiyure ezili-12 zokuthenga ngetyala, kwaye ngubani ofanelekileyo, ukuba athathe ikhosi eyongezelelweyo yeeyure ezi-4 kwiseshoni nganye ngaphandle kokufunda.
Ndiyakholelwa ekucwangciseni okusebenza nzima njengokuba usenza, iinkqubo eziyilelwe ngeemfuno zakho engqondweni, kunye nobuchule obulungele ukubonelela ngenkxaso xa uyifuna kakhulu. Njenge-alumnus, owayesakuba ngumhlohli weHodges, kunye negosa eliyintloko kwezemfundo, ndibuyele ekhaya ukuze ndihambise phambili iinjongo zeYunivesithi yaseHodges zokuxhasa lonke uhlobo lomfundi, kuba ndiyakholelwa kuwe nakwikamva lakho. ”
UGqirha John Meyer, uMongameli weYunivesithi yaseHodges kunye neAlumni (BS & MBA)
Sebenza kwihlabathi elizaliswe linani ngesiGanga se-Akhawuntingi.
Uyilo lwedijithali kunye neMizobo
Sebenzisa izakhono zakho zoyilo kunye nezobugcisa ngenqanaba loYilo lweDijithali kunye neMizobo.
Iinkonzo zezoNyango eziNgxamisekileyo (i-EMS) -Iinkqubo zeParamedic
Lugqibe uQeqesho lweParamedic kunye neenkqubo zethu zeenkonzo zoNyango oluNgxamisekileyo.
IiNkqubo zeSayensi yezeMpilo
Ukufumana izakhono kunye noqeqesho ukugxila kukhathalelo lwezigulana kunye nophando
Funda ukusebenzisa izakhono zolawulo kunye noqeqesho ukuze abasebenzi bakwazi ukugxila kwinto ebaluleke ngokwenene- impilo yesigulana.
Fumana uQeqesho-Ukuphumelela uQeqesho lwaBaqeqeshi boMthetho kunye noMthetho.
Umncedisi wePhysical Therapist uQeqesho oluQinisekisiweyo lweCAPTE.